Jamie Carragher oo sheegay qaabka loo soo afjari karo horyaalka Premier League – Gool FM
Jamie Carragher oo sheegay qaabka loo soo afjari karo horyaalka Premier League
Dajiye March 14, 2020
(England) 14 Mar 2020. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jamie Carragher ayaa difaacay fursada ay kooxdiisa ugu guuleysan karto hanashada horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaddib muddo 30 sano ah oo aysan ku guuleysan.
Jamie Carragher ayaa si weyn kaga soo horjeestay soo jeedin kasta ee lagu joojinayo horyaalka Premier League, sababa la xiriira faafida caabuqa Coronavirus.
Wargeska “Metro” ee dalka England ayaa wuxuu soo xigtay qoraal uu Halyeeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jamie Carragher ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee twitter-ka waxaana uu yiri:
“Waa cadaalad in la soo afjaro xilli ciyaareedka tartamada horyaal kasta, laakiin marka ay suurtogal tahay in kubadda cagta mar kale la ciyaaro.”
“Qabanqaabiyeyaasha kubbadda cagta waxay heleen xal ay ku dhigaan kulamada Koobka Aduunka bartamaha xilli ciyaareedka, sidaas darteed waxaan hubaa inay xal u heli doonaan xilli ciyaareedka soo socda.”
Hadalka Jamie Carragher ayaa wuxuu yimid kaddib markii la soo jeediyay in la kansalo dhamaan natiijooyinka xilli ciyaareedkan, iyadoo aan loo tixgalin doonin in kooxi la siiyo, isla markaana ay bilaabaan xilli ciyaareed cusub bisha Agoosto.
Maamulka Premier League ayaa wuxuu si ku meel gaar ah u hakiyay kulamada horyaalka ilaa iyo April, kaddib markii la shaaciyay inuu haleelay macalinka kooxda Arsenal ee Mikel Arteta iyo weeraryahanka Chelsea ee Callum Hudson-Odoi.
Lionel Messi oo soo diray fariin ku aadan Coronavirus
Waa tee Kooxda uu dalabka ka helay Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos?